कञ्चनपुरका ७८ महिला हराए
भदौ ०२, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
कञ्चनपुर, २ भदौ : कञ्चनपुरका तीन वटा नगरपालिका क्षेत्रबाट आव ०७४÷७५ को असार मसान्तसम्म ७८ जना महिला हराएका छन् ।बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट महिला हराएको भन्दै खोजतलासका लागि निवेदन परेको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले जनाएको छ ।
हराएका ७८ महिलामध्ये २४ जना महिलामात्रै फेला परेका छन् । इप्रका झलारीका प्रहरी निरीक्षक रमेशदत्त अवस्थीले भन्नुभयो, “अझै ५४ जना महिला फेला पर्न सकेका छैनन् ।” सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका श्रीमती हराएका छन् । अर्कैसँग भागी विवाह गर्ने तथा रोजगारीको प्रलोभनमा परेर हराउने गरेको पाइएको छ । हराएका महिला बेचबिखनमा परेको भने पाइएको छैन प्रहरी निरीक्षक अवस्थीले भन्नुभयो, “बीस वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरका महिला बढी हराएका छन् ।” हराउनेमा ५० वर्षसम्मका महिला पनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सोही अवधिमा तीनवटै नगरपालिका क्षेत्रका ११ जना बालबालिका हराएकामा जसमध्ये नौ जना फेला परेका छन् । दुई जना अझै फेला परेका छैनन् । हराउने बालबालिका १४ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका बढी रहेका छन् । हराएका महिला र बालबालिका परिवारको सम्पर्कमा पुगे पनि प्रहरीलाई खबर नगर्दा सङ्ख्य धेरै देखिएको बताइएको छ ।
प्रकाशित : शनिबार, भदौ ०२, २०७५१८:०६
ट्याङ्करले ठक्कर दिँदा विनयराजको मृत्यु!
दक्ष जनशक्ति अब विदेश जानु नपर्ने ः राजेश काजी श्रेष्ठ
“हाम्रो कर्णाली हामी आफैँ बनाउँछौँ”
Breaking News : ७ दिनदेखि हराएका जोन तामाङ जिवितै भेटिएपछि जोनकी आमाले के भनिन् ?
दीपक मनाङ्गे कारागार चलान
प्रदेश नं ४ काे प्रदेशसभा बैठक शुरु
डा.केसीमाथी उठ्यो नैतिक प्रश्न, भेटिए ‘तीनथरी’ जन्ममिति
२२ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
४६ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
Administration: i[email protected]